Archive du 30-août-2021
Hetsiky RMDM tany Frantsa “Miala Rajoelina sy forongony”
Notanterahin’ireo Diaspora RMDM any Frantsa nahitana ny avy any Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Tours, Rennes, Bretagne,...
Tsy mba leo fahafaham-baraka ve ?
Izay rehetra atao toa misy zavatra kisampontsampona foana satria manao zavatra aloha vao mandinika, fa tsy mandinika vao manao zavatra.
Barean’i Madagasikara Anatin’ny heriny tsara ireo ao afovoan’ny kianja
Azo lazaina ho anatin’ny heriny tsara amin’izao fotoana izao ny ao afovoan’ny kianjan’ny Barean’i Madagasikara ao, raha ny tombana momba ny aavo teknikan’ireo mpilalao voaray hatreto.
Fanjakana manao izay saim-patany Miandry ny famindram-pon’ny CAF
Tokony hanaiky ary hanaja ny fanapahan-kevitry ny CAF, raha tsy manaiky ny hahafahan’ny mpijery manatrika ny lalao etsy Mahamasina izy ireo, hoy ny tompon’andraikitra ara-panjakana.
Mihatra aman’aina ny fanaovan-gazety Lavon’ny jiolahy i Tiana Rakotoarimanana
Namoy ny ainy ny marainan’ny sabotsy teo ny namana mpanao gazety ao Fianarantsoa, Tiana Rakotoarimanana. Raha ny fampitam-baovao voaray dia tsy nahatsiaro tena izy hatramin'ny
Faritra Atsimo Atsinanana Mbola maro ireo vehivavy hiharan’ny herisetra
Mbola maro ireo vehivavy hiharan’ny herisetra any amin’ny Faritra Atsimo Atsinanana. Miseho amin’ny endriny maro izany toy ny tsy fanomezan’ny vadiny vola azy ireny, ny fanaovana fitenenana maharary…..
Federasionina Malagasin’ny baolina kitra Ahiana hilatsaka indray ny sazy
Mazava ny fanambaran’ny avy eo anivon’ny kaonfederasionina afrikanin’ny baolina kitra na CAF fa tsy azo hatrehina izany ny lalao izay hihaonan’ny
Jeux de Melaky 2021 Tonga namafa ny dian-dry Siteny ny Fanjakana
Nifarana ny sabotsy 28 aogositra lasa teo ny “Jeux de Melaky” andiany faha-32 notanterahina tany Maintirano. Tsy toy ny tamin’ny fanokafana tamin’ny 20 aogositra,
Tapakila efa nozaraina Manao teny roa ny fanjakana
Mbola nitohy omaly ny fizarana sy ny filaharana tapakila teny Mahamasina. Hijerena ny lanonana hoy ny avy ao amin’ny Fiadidian’ny Repobika ny tapakila nozaraina nanomboka ny sabotsy teo,
Fanoherana ny Taxi-moto Miditra an-tsehatra ireo vadina mpamily Taxi-ville
Nivoaka tamin’ny fahanginana ny sabotsy teo ireo vehivavy vadina mpamily fiara karetsaka na taxi eto Antananarivo renivohitra.
Fihaonan’i Madagasikara sy Bénin Misavoritaka ambony ambany ny fandaminana
Mba tsy hilazana intsony hoe ratsy ny fanomanana ny fihaonan’ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra amin’ny “Ecureuil”
Tsy fahaiza-mamaky teny sy manoratra Misy olon-dehibe hatrany amin’ny 70 taona mbola vonon-kianatra
Mbola betsaka ireo olona tsy mahay mamaky teny sy manoratra eto amintsika. Tsy hanavahana sokajin-taona izany fa misy hatrany amin’ny olon-dehibe 70 taona.
Mpiasan’ny Kraoma “Omeo poizina izahay ho faty rehefa tiana hovonoina”
Tsy mety mivaha ny olan’ny orinasam-panjakana KRAOMA na Kraomita Malagasy ao Brieville, izay efa 2 taona izao no voalaza fa tsy nandray karama ny mpiasa.
Olan’ny QMM sy ireo vondron’olona- Taolagnaro Hatsangana ny sampan-draharaha manokana hamahana azy
Nidina ifotony nandamina ny disadisa niverimberina tsy nety voavaha hatramin’ny 2005-2009, 2013-2018 teo amin’ny orinasam-pitrandrahana QMM
Fifidianana 2023 Manao pi-maso amin'ny Diaspora i Rajoelina
Namory olona tao Frantsa ny Filoha Andry Rajoelina ny sabotsy lasa teo. Nandritra io no niresahany ny antony nihaonany tamin’ny Filoha Frantsay Emmanuel Macron.